လိမ်ညာခဲ့ကြခြင်း မဖြစ်နိုင်ပါ သလော? | အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ
လိမ်ညာခဲ့ကြခြင်း မဖြစ်နိုင်ပါ သလော?	December 10, 2009
Filed under: ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း,ယေရှုခရစ်တော် — amayaphay @ 11:00 am
ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို အနီးကပ်ဆုံး လက်ရုံးတော်တပည့်တော် များက လိမ်ညာခဲ့ကြခြင်း မဖြစ်နိုင်ပါ သလော?
လူလိမ်များ လိမ်ညာပြောဆိုကြခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ သူတို့၏ အတ္တအတွက်ပါ၊ တမန်တော်တို့က လိမ်ညာခဲ့ရိုးမှန်လျှင် အဘယ့်ကြောင့် သူတို့ရဲ့ တရားစကားတွေအပေါ် ရပ်တည်ခဲ့ကြရပါသလဲ၊ သူတို့၏ တရားစကားကြောင့် လူများ၏ နားလည်မှုနှင့် အထင်လွဲခြင်းခံရ၊ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခံရ၊ အကြိမ်ကြိမ် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရ၊ အနိုင်ကျင့်ခံရ၊ ထောင်ချခံရပြီးနောက်ဆုံး ရက်စက်စွာ အသက်ခံခဲ့ကြ ရပါသည်။ သူတို့ ပြခဲ့သော သက်သေသည် သူတို့အတ္တအတွက် လိမ်ညာ အကွက်ဆင် ခဲ့ကြတာပါဟု ဆိုလျှင် ကြောင်းကျိုး ညီညွတ်မှု လုံးဝမရှိသော အကြောင်းအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။
One Response to “လိမ်ညာခဲ့ကြခြင်း မဖြစ်နိုင်ပါ သလော?”
မဟုတ်ပါဟူ ၀န်ခံလိုက်သည်နှင့် သူတောင်းစားလောက်တောင် အဆင့်ရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ။ အာဏာပိုင်များက မသတ်သော်လည်း သူညာဝါးထားသော သူများက သတ်မည် အမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ သေမထူး နေမထူး ခပ်ရူးရူးများ ကြောက်ကန်ကန်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ နေရာတိုင်းကို ပြန့်နှံခြင်းမှာ စစ်တိုက်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။